Lọ ọrụ njem - shandong Gaoqiang New Material Technology Co., Ltd.
Shandong Gaoqiang New Material Technology Co., Ltd. emi odude ke na lọjistik isi obodo nke Linyi City, n'ebe ugwu nke China. The ụlọ ọrụ na-pụrụ iche na nnyocha na mmepe na mmepụta, nhazi na n'ire ọkachamara nwetara nke ihe admixtures.
Shandong Gaoqiang New Ihe Technology Co., Ltd. ekpuchi ebe nke 14 mu, na 9100 square mita maka ụlọ ebe 600 square mita maka nnyocha sayensị na laabu. Anyị ụlọ ọrụ wuru a zuru ezu ihe admixture mmepụta akara, chemical analysis na nkịtị onwunwe laabu na Shandong University of Building na Beijing University nke obodo Engineering, onwem na oge a ngwá maka ji na ule nnukwu-ọnụ ọgụgụ ngwá na akụrụngwa
Companylọ ọrụ anyị nwere nyocha siri ike na otu mmepe nwere ndị dọkịta ọkachamara, ndị isi nke Mahadum Shandong nke Owuwu. Anyị isi na ngwaahịa ndị Polycarboxylate dabeere PCE nne mmanya, Superplasticizer slump Njigide,
Polycarboxylate based Superplasticizer Water Ibenata mmata.
Shandong Gaoqiang New Ihe Technology Co., Ltd. mgbe niile rube isi na àgwà dị ka ntọala, ọhụrụ dị ka ike, na-agbasi mbọ ike ụlọ ihe ụlọ ọrụ ndú. Iguzosi ike n'ezi ụlọ ọrụ anyị, ike na mma ngwaahịa nweta nnabata ụlọ ọrụ. Onye isi njikwa na ndị ọrụ niile na ụlọ ọrụ ahụ na-anabata ndị enyi
site na ndụ dị iche iche iji gaa, nduzi na mkparịta ụka azụmahịa.
SHlọ ọrụ ngosi
Nkọwapụta ebe ngosipụta